खण्डग्रास सूर्यग्रहण : कुन राशिलाई शुभ, कुनलाई अशुभ ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । पुस १० गते बिहीबार पौष कृष्ण औँसीका दिन बिहान खण्डग्रास (आधा ढाक्ने) सूर्यग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। ग्रहणले बिहान ८ः४२ मा स्पर्श गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
पश्चिम र नैऋत्य कोणको बीचबाट बिहान ग्रहण शुरु हुनेछ। बिहान १०ः०१ बजे मध्य हुने ग्रहण ११ः३१ बजे समाप्त हुनेछ। पूर्व र आग्नेय कोणको बीचबाट ग्रहण समाप्त हुने समितिले जनाएको छ।
ग्रहण लाग्नुभन्दा चार प्रहर (१२ घण्टा) अघि अर्थात पुस ९ गते बेलुकी ८ः४२ देखि बालक, वृद्ध र रोगीबाहेकलाई शास्त्रीयरूपमा भोजन निषेध रहेको उनले सुनाए। ग्रहणका बेलामा खानपिनलगायत महत्वपूर्ण कामका लागि निषेध गरिएको छ।
ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधनालगायत कर्म गर्न भने शुभ हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। ग्रहणका समयमा दीक्षा मन्त्र लिन पनि उत्तम मानिन्छ।
ग्रहणका बेला सकेसम्म तीर्थस्थलमा नसके नजिकको नदी, ताल, तलाउ, पोखरी यति पनि सम्भव नभए घरमै स्नान गर्नुपर्ने निर्णयसिन्धु, हेमाद्रि, कालमाधव, वीरमित्रोदयलगायत धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ।
कुन राशिलाई शुभ, कुनलाई अशुभ ?
२०७६ साल पौष १० गते बिहान औंसी तिथिका दिन सूर्य ग्रहण लाग्दै छ । बिहान ८ बजेर ४२ मिनेटबाट स्पर्श गरि बिहान ११ बजेर १ मिनेटमा मध्य हुँदै बिहान ११ बजेर ३१ मिनेटमा मोक्ष हुनेछ ।
खण्डग्रास सूर्य ग्रहण नेपाल, भारत, श्रीलंका लगायत एशियाका सबै देशबाट देख्न सकिनेछ भने हिन्द महासागर, मलेसिया, पूर्वी यूरोप, उत्तररपश्चिम अष्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका लगायत अधिकांश भागबाट देख्न सकिनेछ ।
जुन नक्षत्र र जुन राशिमा ग्रहण लाग्दछ त्यो नक्षत्र र राशि भएका व्याक्तिहरुलाई कष्ट हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । पौष १० गते मूल नक्षत्र र धनु राशिका व्यक्तिहरुले सजक हुनुपर्नेछ । १२ राशि भएका व्याक्तिहरुका लागि ग्रहण फल यसप्रकार रहेको छ ।